Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina onesivinini esikhulu Qiangzhong
Isilinda sokuxuba esisheshayo
Isetshenziswa kabanzi ezimbonini zezindawo zokuphisa utshwala, imikhiqizo yobisi, isiphuzo, amakhemikhali ansuku zonke, ama-bio-pharmaceuticals, njll. Hlanganisa, hlakaza, emulsify, homogenize, ezokuthutha, i-batch…
Ukusekelwa kwefayela lobuchwepheshe: okuhlinzeka ngokungahleliwe imidwebo yemishini (i-CAD), umdwebo wokufaka, isitifiketi sekhwalithi yomkhiqizo, imiyalo yokufaka kanye nokusebenza, njll.
Imishini isebenzisa idivaysi yokuxuba phansi enejubane eliphezulu yempepho futhi ingakwazi ukuncibilikisa kahle i-toffee, izithasiselo ze-powder, nokunye, futhi njengamanje iyimodeli ekhiqiza kakhulu yethangi lokuxuba elinejubane elikhulu. Imishini ibonakala ngesikhathi esifushane sokuxuba nokwenza i-homogenization, ngaphandle kokuthinta ukusebenza kwezinto, ukuqinisekisa ukunambitheka koqobo, ukusebenza okulula, usayizi omncane nokufakwa okulula. Kuyinsiza ebaluleke kakhulu yezimboni zobisi, iziphuzo nezemithi.
Ngaphansi kwethangi, i-rotor ijikeleza ngesivinini esikhulu futhi ikhiqiza ukugeleza kwengcindezi ephezulu kwe-centrifugal ngezinga elikhulu lokugeleza. Ngemuva kwalokho izinto zidlula ngegebe elincane phakathi kwe-stator ne-rotor ngamandla okugunda aqinile, ahambisana namanye amandla omthelela, ukukhishwa nokugaya. Ngasikhathi sinye, ukugeleza okuphezulu kwengcindezi ye-centrifugal kwenza izinto zijikeleze ekuhambeni kwe-vortex. Ngemuva kokujikeleza kwemizuzu eyi-10, izinto zisheshe zincibilike, zihlakazeke, zichotshozwe, kugxishwe emhlabathini, kuxutshwe, kwenziwe i-homogenized futhi kuqiniswe emulsified ukuze kwenziwe i-slurry enhle.
I-HYG series ithangi lokuxhuma ngejubane elikhulu linokusebenza kokuxuba okungcono kakhulu uma kuqhathaniswa nemishini yokuxuba yendabuko. Imishini yokuxuba yendabuko ithatha isikhathi eside ukucubungula nokuxuba izinto zokubamba okuphezulu kanye nezinto zezinhlayiya eziqinile. Kepha kuba lula kakhulu ukuzicubungula ngothangi lokuxhuma ngejubane le-JBG esikhundleni salokho. Okwethangi lokuxubana ngejubane le-JBG, zonke izingxenye eziyinhloko zenziwe ngensimbi engenasici esezingeni eliphakeme kufaka phakathi umzimba wethangi, i-Rotor, i-stator, ukufakwa kwepayipi, ama-valve, njll. Uphawu lwemishini lunesakhiwo esikhulu sesinxephezelo, okwenza ithangi lingagxili, lihlale isikhathi eside futhi limele ukulimala. Okwe-JBG / X ithangi lokuxhuma ngejubane eliphezulu, ingxenye engavulwa ingavulwa ukuze kube lula ukugeza izikhala zemishini, efanelekile ukucubungula izinto eziphilayo, izinto ezonakalayo kalula futhi nokuxuba izinto ezilula ezomile.
Langaphambilini Manual lift uhlobo phuca mixer
Olandelayo: Amanzi ne-powder mixer ngeplatform
Umgqomo wokuxuba osezingeni eliphansi
Umgqomo wokuxuba i-shear ephezulu
Isilinda sokuxuba esisheshayo ezansi
Insimbi engagqwali yokuphakamisa umfutholuketshezi weselula
Umshini wokusabalalisa wobakaki ohleliwe
Ukuphakamisa ugesi okuphezulu kwe-shear emulsifier
Ijubane elikhulu lokushaya i-Tank